haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2020-01 > Famantarana ny fotoana
Ny filazantsara dia midika "vaovao mahafaly". Nandritra ny taona maro dia tsy vaovao tsara tamiko ny filazantsara satria efa nampianarina ahy nandritra ny ankamaroan'ny fiainako izay andro iainantsika izay. Mino aho fa ny "faran'izao tontolo izao" dia ho afaka amin'ny taona vitsivitsy, fa raha manao araka izany kosa aho dia ho voaaro amin'ny Fahoriana Lehibe. Ity karazana fijerin'ny tontolo ity dia mety hampiankin-doha, ka mirona hahita ireo zava-mitranga rehetra eto amin'izao tontolo izao amin'ny alàlan'ny solomaso amin'ny fandikana hafahafa ny fisehoan-javatra izay hitranga amin'ny fotoanan'ny farany. Ankehitriny izany fomba fisainana izany dia tsy ho fitrandrahana amin'ny finoako kristiana sy fototry ny fifandraisako amin'Andriamanitra, izay tena isaorako be.
Tao anatin'ny andro vitsy
Nanoratra toy izao ho an’i Timoty i Paoly: “Tokony ho fantatrao izao fa ho avy ny andro mahory amin’ny andro farany.” (2. Timoty 3,1). Inona no taterin'ny vaovao isan'andro androany? Hitantsika ny sarin'ny ady feno habibiana sy ny tanàna voadaroka baomba. Tatitra momba ireo mpitsoa-ponenana nandao ny fireneny tsy nisy fanantenana. Fanafihana fampihorohoroana miteraka fijaliana sy tahotra. Misedra loza voajanahary na horohoron-tany manimba ny zavatra rehetra naoritsika isika. Misy climax ve? Ho avy tsy ho ela ve ny Ady Lehibe III?
Rehefa niresaka momba ny andro farany i Paoly, dia tsy nilaza mialoha ny hoavy. Niresaka momba ny toe-javatra niainany sy ny fivoaran’ny tontolo iainany kosa izy. Ny andro farany, hoy i Petera tamin’ny Pentekosta, rehefa nanonona ny tenin’i Joela mpaminany, dia efa tamin’ny taonjato voalohany: “Ary amin’ny andro farany, hoy Andriamanitra, dia handatsaka ny Fanahiko amin’ny nofo rehetra Aho; ary ny zanakalahinareo sy ny zanakavavinareo haminany, ary ny zatovonareo hahita fahitana, ary ny loholonareo hanonofy » (Asan’ny Apostoly 2,16- iray).
Nanomboka tamin’i Jesosy Kristy ny andro farany! “Efa elaela no nitenenan’Andriamanitra tamin’ny razantsika tamin’ny alalan’ny mpaminany tamin’ny fomba maro samy hafa, fa amin’izao andro farany izao kosa dia tamin’ny alalan’ny Zanany no nitenenany tamintsika” (Hebreo). 1,1-2 Baiboly Fiainana Vaovao).
Ny filazantsara dia momba an’i Jesosy, iza izy, inona no nataony ary inona no azo atao noho izany. Rehefa nitsangana tamin’ny maty i Jesosy, dia niova ny zava-drehetra – ho an’ny olona rehetra – na fantany na tsia. Nohavaozin’i Jesosy ny zavatra rehetra: «Fa tao aminy no nahariana ny zavatra rehetra any an-danitra sy etỳ an-tany, na hita na tsy hita, na seza fiandrianana, na fanapahana, na fahefana, na fahefana; Izy no nahariana ny zavatra rehetra sy ho Azy. Ary ambonin’izy rehetra Izy, ary ao aminy avokoa ny zavatra rehetra » (Kolosiana 1,16- iray).
Ady, mosary ary horohorontany
Nandritra ny taonjato maro dia nirodana ny fiaraha-monina ary tapaka ny herisetra. Ny ady dia efa anisany foana ao amin'ny fiaraha-monina. Ny loza voajanahary dia nitondra ny olombelona nandritra ny an'arivony taona maro.
Hoy i Jesosy: “ Handre ady sy horakoraka ianareo; mitandrema ary aza matahotra. Satria tsy maintsy atao izany. Saingy mbola tsy ny farany. Fa ny firenena iray hitsangana hamely ny hafa, ary ny fanjakana iray hamely ny namany; ary hisy mosary sy horohorontany etsy sy eroa. Fa izany rehetra izany no fiandohan’ny fisasarana » (Matio 24,7- iray).
Hisy ny ady, mosary, loza ary fanenjehana, fa aza gaga amin'izany. Nahita loza maro ny izao hatramin'ny nanombohan'ny The Last Days efa ho 2000 taona lasa izay ary mino aho fa mbola betsaka kokoa. Andriamanitra afaka mamarana ireo olan'izao tontolo izao isaky ny tiany. Mandritra izany fotoana izany dia tsy andriko izay andro lehibe hitranga rehefa hiverina i Jesosy. Indray andro dia ho tonga ny farany.
Soa ihany fa mila finoana isika ary manantena na misy ady na tsia, na akaiky ny farany na tsia. Mila finoana sy zotom-po isika, na manao ahoana na manao ahoana ratsy ny andro, na firy ny loza hitranga. Ny andraikitsika amin'Andriamanitra dia tsy miova. Raha mijery ny zava-misy eran'izao tontolo izao ianao dia mahita loza any Afrika, Azia, Eropa, Oceania ary Amerika. Hitanao ny tanimbary fotsy sy vonona ny fijinjana. Misy asa raha mbola tsy toy ny andro. Tokony hanao izay tsara indrindra azonao ianao amin'izay anananao.
Inona no tokony ataontsika
Aiza no misy antsika ankehitriny? Efa ao anatin'ny fotoana izay tokony hitorin'ny fiangonana ny filazantsara isika. Jesosy dia niantso antsika hanohy hitarika ilay hazakazaka hatramin'ny farany amim-paharetana. I Paoly koa dia miresaka ny hiafarany rehefa afaka ny famoronana amin'ny fahantran'ny tsy fahampiana ary ny zanak'Andriamanitra dia omena fahafahana sy voninahitra amin'ny ho avy.
« Ary na dia isika, izay efa nomen’Andriamanitra ny Fanahiny, ho santatra amin’ny lova ho avy, dia mbola misento ato am-pontsika, satria ho tanteraka izay voatendry ho zanak’Andriamanitra, dia miandry izany isika. ny vatana dia voavotra koa » (Romana 8,23 Fandikan-teny Genève Vaovao).
Hitantsika ny olan'izao tontolo izao ary miandry am-paharetana isika: «Fa voavonjy ho amin'ny fanantenana isika. Fa ny fanantenana hita dia tsy fanantenana; satria ahoana no ahafahanao manantena ny zavatra hitanao? Fa raha manantena izay tsy hitantsika isika, dia miandry azy amin'ny faharetana. ”(And. 24-25).
Toy izany koa no niainan’i Petera, niandry ny andron’ny Tompo izy: “Fa ho avy toy ny mpangalatra ny andron’ny Tompo; dia hiempo amin'ny firohondrohona mafy ny lanitra; fa ny zavatra rehetra dia ho levona noho ny hafanana, ary ny tany sy ny asa eo amboniny dia tsy ho hita intsony.»2. Petrus 3,10).
Inona no torohevitra omeny antsika? Inona no tokony hataontsika eo am-piandrasana ny andron'ny Tompo? Ahoana no hiainantsika? Tokony hiaina fiainana masina sy masina isika. "Raha ho levona izany rehetra izany, ahoana no tokony hijoroanao eo amin'ny lalan'ny olona masina sy ny olona mendri-pitokisana, izay miandry ny fiavian'ny andron'Andriamanitra ka maika hitsena azy" (andininy 11-12).
Andraikitrao isan'andro izany. Antsoina hanana fiainana masina ianareo. Jesosy dia tsy naminany hoe rahoviana no ho tonga ny faran’izao tontolo izao, satria tsy fantany ary isika koa: “Fa tsy misy mahalala ny andro sy ny ora, na dia ny anjely any an-danitra aza, na dia ny Zanaka aza, afa-tsy ny Ray ihany. » (Matio 24,36).
Ho an'ny tanin'ny Isiraely ao amin'ny fanekena taloha, Andriamanitra dia nampanantena fa hitahy izany amin'ny alàlan'ny fanekena manokana raha toa ka mankato izany ny firenena. Izy io dia hisorohana ny loza voajanahary izay mamely ny ratsy sy ny marina. Tsy nomeny ny firenen-kafa izany antoka izany. Ireo firenena maoderina dia tsy afaka mandray ny fitahiana nomen'Andriamanitra ny Isiraely tamin'ny fifanekena manokana efa ela.
Ao anatin'ity tontolo lavo ity dia avelan'Andriamanitra hisy loza voajanahary, fahotana ary faharatsiana. Izany koa dia mamela ny masoandro hilentika ary ny orana hilatsaka eo amin'ny ratsy na ny tsara. Tahaka ny asan'i Joba sy i Jesosy no aseho amintsika, dia avelany hianjera amin'ny marina ihany koa ny ratsy. Indraindray dia mitsabaka amin'ny raharaha ara-batana Andriamanitra mba hanampy antsika. Saingy ny fanekena vaovao dia tsy manome antoka hoe rahoviana, amin'ny fomba sy aiza no hanatanterahana izany. Ny fanekena vaovao dia miantso antsika hino na eo aza ny toe-javatra. Miantso antsika ho mahatoky Izy na dia eo aza ny fanenjehana sy ny faharetana na dia eo aza ny faniriana fatratra ny tontolo tsara kokoa ho entin'i Jesosy.
Ny fanekena vaovao, ny fanekena tsara kokoa, dia manome fiainana ara-panahy ary tsy manome antoka fitahiana ara-batana. Amin’ny finoana no tokony hifantohantsika ny ara-panahy fa tsy ny ara-batana.
Ity misy eritreritra iray hafa izay afaka mametraka ny faminaniana amin'ny fomba fijery mahasoa. Ny zava-dehibe amin'ny faminaniana dia tsy mifantoka amin'ny daty, fa ny andraikitra lehibe indrindra dia ny mitondra antsika amin'i Jesosy mba hahafantarantsika azy. Jesosy dia fitahiana lehibe indrindra azonao raisina amin'ny fiainanao. Raha tratranao io tanjona io dia tsy mifantoka amin'ny lalana mitondra azy intsony fa amin'ny fiainana mahafinaritra miaraka amin'i Jesosy amin'ny fiarahana amin'ny Ray sy ny Fanahy Masina.